Samsung Galaxy Home: ဘယ်အချိန်ဈေးကွက်သို့ရောက်မည်နည်း။ | Androidsis
ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြ Samsung Galaxy Home စတင်မိတ်ဆက်။ ဒါပေမယ့်တစ်နှစ်ကျော်သွားပါပြီ။ သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ Google Home နဲ့ Amazon Echo ကိုခုခံဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူကမျှော်လင့်ထားတဲ့စပီကာရဲ့သဲလွန်စတွေတော့မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ? ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်နီးပါးဖြစ်နိုင်ပါသလား။
အမှန်စင်စစ်ဆိုးလ်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည်နောက်ဆုံး၌ဖြန့်ချိမည့်နေ့ကိုကြေညာခဲ့သည် သူ၏ Samsung Galaxy Home ရောင်းချမှုနှောင့်နှေးခဲ့ရသည်။ Samsung ကိစ္စတွင်သူကအကြောင်းပြချက်၊ အက်ပလီကေးရှင်းသည်ပျော်စရာကောင်းသည့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်နှင့်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုမရှင်းပြခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်အမေရိကန်ကုမ္မဏီက၎င်းကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဖြင့်လည်ပတ်ရန်နည်းလမ်းမရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ Samsung ရဲ့ voice assistant နဲ့ဆင်တူမလား။ အများဆုံးဖွယ်ရှိဟုတ်ကဲ့။
Samsung Galaxy Home မှာပြhardwareနာကသူ့ရဲ့ hardware မဟုတ်ဘဲ software ပါ
ဖြစ်ရပ်များသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ Apple သည်အကြောင်းပြချက်ကိုအသိအမှတ်မပြုသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်သူတို့က Apple AirPower ကိုဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိနိုင်ခြင်းမရှိဟုပြောရုံဖြင့်ကန့်လန့်ကာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည် ဖုန်း၊ smartwatch နှင့် tablet တို့ကိုဆက်သွယ်သောအခါ၎င်း၏ multi-device ကြိုးမဲ့အားသွင်းစက် dock ခံစားခဲ့ရသည်။
လာပါ၊ အက်ပဲလ်ဟာအပူကိုထိထိရောက်ရောက်မဖြုန်းနိုင်ဘူး။ ထိုအခါဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်ပြproblemနာကနောက်ဆုံးတော့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် Apple က AirPower အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ၏ထောင်ပေါင်းများစွာသောဖောက်သည်များ၏စိတ်ထဲတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။ Samsung Galaxy Home နှင့်အလားတူတစ်ခုခုဖြစ်ပါသလား။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။
ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူသည်အသံထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ခင်ဗျားတို့ဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုစုံလင်တဲ့စပီကာများနှင့်အသံဘားများကိုကြည့်ရှုရုံသာဖြစ်သည်။ အာရှကုမ္ပဏီတွင်ဤကဏ္in၌ထိပ်တန်းဖြေရှင်းနည်းအချို့ရှိပါသည် Samsung Galaxy Home ပြproblemနာ ၎င်းသည်ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင့်မဟုတ်ဘဲဆော့ဖ်ဝဲအဆင့်တွင်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ကြွလာဘယ်မှာဒီဖြစ်ပါတယ် Bixby, Samsung မှပျော်ရွှင်သောအသံလက်ထောက် ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သော Alexa နှင့် Google Assistant တို့၏နောက်ကွယ်တွင်စနစ်တစ်ခုရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Samsung ကတကယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်တုက Google နဲ့ Amazon ဖန်တီးတဲ့အရာတွေနဲ့မယှဉ်နိုင်ဘူး။ အကယ်စင်စစ်, ထုတ်လုပ်သူသည်ဤပြိုင်ဘက်မှတက်မတ်တပ်ရပ်နိုင်စွမ်းသောအခြေအနေများတွင်ထုတ်ကုန်စတင်ရန်နိုင်ဖို့နာရီကိုဆန့်ကျင်အလုပ်လုပ်သည်။
Las Vegas ရှိ CES ၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေမှုအတွင်း၌ပင်သူတို့သည်၎င်းတို့၏စပီကာ၏ Mini version ကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ရှိပြီးသား Samsung Galaxy Home Mini ၏ပုံအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်, ယခုတွင်အဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး? ထုတ်လုပ်သူက၎င်းသည် ၂၀၂၀ ပထမသုံးလပတ်တစ်လျှောက်လုံးဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုအာမခံထားသည်။
ဆိုးလ်အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူက Samsung SmartThings နှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသံလက်ထောက်ကိုဆက်လက်တောင်းဆိုခဲ့သည် IoT ဖြေရှင်းချက်များ။ နှင့်အညီ၊ လက်ရှိ Bixby သည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်အလုံအလောက်မရှိပါ။ ဒါမှမဟုတ်ဒါကပုံပါ။ သူတို့က Samsung Galaxy Home Mini ကိုဒီမှားယွင်းမှုကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်မလား။ သေချာတာပေါ့၊ ပြီးတော့ဒီ mini version ကိုစျေးသက်သာသောကြောင့်ဖွင့်ပါ၊
ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ဖောက်သည်များကို guinea ဝက်များအဖြစ်အသုံးပြုရန်နှင့်သူတို့၏အသံလက်ထောက်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအခွင့်အလမ်းပိုရှိလာလိမ့်မည်။ Samsung Galaxy Home ကိုရောင်း။ ဒီမော်ဒယ်က high-end ဖြေရှင်းချက်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာကိုသတိရပါ၊ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသံအရည်အသွေးကအများကြီးပိုမြင့်လာမယ်၊
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Samsung သည်သတိထားမိလာပြီး Alexa သို့မဟုတ် Google Assistant ကို၎င်း၏စမတ်ပီပီမိသားစု၏ဘဝကိုပေးမည်ဟုဆုံးဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီကြော်ငြာဆိုလိုလိမ့်မယ်Bixby အတွက်ခဲယဉ်းသည်ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးအပြောင်းအရွေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Nokia မှာဖြစ်ခဲ့တာနဲ့တူတာတစ်ခု (နိမ့်ကျတဲ့အဆင့်) မှာသူဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ သူက Android ဂေဟစနစ်ကိုလက်ခံမယ့်အစား Symbian နဲ့သူဖန်တီးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့် operating system အသစ်ကိုဆက်ပြီးစဉ်းစားနေခဲ့တယ်။ ဂူဂဲလ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung Galaxy Home က Apple AirPower ကိစ္စလား။
Tecno Spark Go Plus သည်ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးဈေးနှုန်းမှာယူရို ၈၀ ခန့်ရှိသည်